Qarax gaari oo ka dhex dhacay xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Qarax gaari oo ka dhex dhacay xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho
Wararka aan ka helayno Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho, ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay qarax lagu xiray mid ka mid ah gaadiidka ay isticmaalaan ciidamada ilaaliya Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho.
Xarunta UNDP ay degan tahay waxa ay ku taalla wadada aada Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho, gaariga qarxay ayaa saaka laga soo bixiyay garaash ku yaallo Isgoyska kM4 oo xilliyada habeenkii ah lagu xareeyo gaariga.
Markii gaariga Garaashka laga soo bixiyay oo la geeyay xarunta UNDP, islamarkaana ciidamada ay ka daateen, ayaa waxaa lagu xareeyay gaariga Garaash yar oo ku dhex yaalla Xarunta UNDP, halkaasi oo gaadiidka UNDP ay leedahay lagu xareeyo.
Nooca gaariga ah oo midka Somalida ay u taqaan Qooqan (Hilux) ayaa isaga oo dhex yaalla garaashka mar kaliya uu qarxay, waxaana ku dhaawacmay Afar ka mid ah ciidamada ilaaliya Garaashka yar ee ku dhex yaalla Xarunta UNDP ee Muqdisho.
Ilaa hada ma cadda in gaarigaasi qaraxa lagula xiray Garaashkii uu xalay ku hooyday iyo in kale, balse goobta waa ay xiran tahay, waxaana tagay Saraakiisha dowladda.
Ilaalada UNDP oo ah dhalinyaro aanan ka tirsaneyn ciidamada Xooga dalka Somaliya, ayaa qaab damiin ahaan ah waxa ay ugu shaqeeyaan UNDP, waxayna qaataan Qarashaad ay bixiso Hay’adaasi.
Saraakiisha cadaanka ah ee UNDP ayaa ku howlan baarista halka qaraxa gaariga looga soo xiray inay tahay garaashkii xalay uu ku hooyday Baabuurka iyo inay tahay Garaashka yar ee ku dhex yaallo Xarunta UNDP ee Muqdisho.